Udwebele inkantolo isithombe ngokutholakala kwemoto kanjiniyela - Ilanga News
Home Ezemidlalo Udwebele inkantolo isithombe ngokutholakala kwemoto kanjiniyela
Ingoduso ibhekene necala lokufa kwakhe
LAPHA uNkz Nompumelo Patricia Goncalves obeyingoduso kamufi, uMnu Nkosi Langa, uthathwe ephuma enkantolo njengoba kuqhubeka icala.
IZITHOMB NGU: JOHN HLONGWA
UDWEBELE inkantolo isithombe asifica ngemoto kamufi, umphenyi wecala ngesikhathi echaza ngokutholwa kwemoto kaMnu Nkosi Langa (33), amathambo akhe atholwa ngemuva kwenyanga enyamalele, elahlwe eBhamshela. USgt Accasius Smitla Mokoena, ongumphenyi wecala, ubegibele ebhokisini lofakazi izolo ngoLwesithathu, echazela iNkantolo eNkulu yaseThekwini, ngokutholakala kwemoto kaMnu Langa, okuvele ukuthi ukutholakala kwayo, kwaholela ekutheni kubanjwe abasolwa kuleli cala. ILANGA labika kaningi ngodaba lokunyamalala kukaMnu Langa owayengunjiniyela, laphinde labika ngokutholakala kwamathambo akhe kwelinye lamahlathi eBhamshela. USgt Mokoena, wethula lobu bufakazi nje, bekuvele ingoduso kamufi, uNkz Nompumelelo Patricia Goncalves ongumsolwa wesibili ongaphandle ngebheyili nomfowabo uMnu Nkosinathi Zungu, ongumsolwa wokuqala kuleli cala, yena ongaphakathi.
Ngokwamaphepha asenkantolo, umsolwa wesibili okuyingoduso kamufi, babehlala ndawonye emzini kamufi eHampshire, ePinetown. Aveza ukuthi laba bobabili babenezinkinga ebudlelwaneni babo, okwaholela ekutheni ingoduso kamufi icele umsolwa wokuqala uMnu Zungu, ukuba athumbe, aphinde abulale umufi. Kuvele ukuthi uMnu Zungu wacela usizo lukaJames Mashudu Mthimkhulu, owaziwa ngoRamaphosa, okumanje udonsa isigwebo sakhe ngaleli cala, owavuma ukuthi bambulala uMnu Langa. Ngokwamaphepha, umsolwa wesibili (ingoduso) yathembisa isamba esithile semali nemoto kamufi ngalo msebenzi.
Amaphepha aveze ukuthi mhla ka-29 kuMandulo (September), uMthikhulu nabanye, baya emzini kamufi behlome ngommese, babe sebelinda ndawana thize njengoba kwakuhleliwe. Emuva kokuncinzwa ngumsolwa wesibili, babe sebengena endlini bathatha umufi ngendluzula. Kuthiwa bambopha izandla, bamfaka emotweni yakhe bahamba naye, konke lokhu kwenzeka umsolwa wesibili (ingoduso) iyabukela. Izolo ngoLwesithathu umseshi uvezele inkantolo ukuthi wathola ucingo lumazisa ngemoto yohlobo lweIsuzu X Rider, enezinombolo ezithi, NP 49427, eyayipakwe ndawana thize kusolwa ukuthi yebiwe.
Uthe ngaleso sikhathi wayengasebenzi kodwa emuva kokuthola lolu cingo, wabe esethatha imoto yakhe waya lapho kupakwe khona le moto. “Ngabe sengifika endaweni edayisa utshwala lapho yayipakwe khona, ngangabona muntu phakathi kuyona. Ngabe sengingena ngaphakathi ngoba ngangazi ukuthi kunama-camera. “Ngacela ukuthi umnikazi wendawo angikhombise obekuqoshwa yilama-camera. Ngesikhathi sibuka okuqoshiwe, yabonakala imoto ingena kule ndawo, kuyona kwehla abesilisa abathathu okubalwa nomshayeli. “Laba bayabonakala beya kwabanye besilisa bona ababehamba ngemoto yohlobo lweMazda. Ngenxa yokuthi laba abebehamba ngeMazda babesakhona ngaphandle, ngaya kubona ngafike ngababuza ukuthi ngabe ngubani obeshayela le moto.
“Baphendula ngokuthi umuntu owayeshayela nguPhiwayinkosi. “Ngabe sengifaka amagilavu, ngayivula imoto. Eceleni kwesicabha kwakukhona isifonyo, ngabe sengivula i-cubby hole. Ngathola umazisi wesikhashana kaPhiwayinkosi Mbelu. “Ngathatha i-vin number ngayi bheka, okuyiyona eyaveza ukuthi kunecala lomuntu onyamalele elivulwe ePinetown,” kusho yena. UConst Siyabonga Sithole, okunguyena owayephenya icala lokunyamalala kukaMnu Langa, naye ugibelile ebhokisini echazela inkantolo ngokuxhumana kwakhe noNkz Goncalves, emazisa ngokutholakala kwemoto. Utshele inkantolo ukuthi ngesikhathi emazisa ngokutholakala kwemoto, wayebonakala ethukile ebusweni, kungathi ufuna ukukhala. Icala liyaqhubeka
Previous articleInyanga yodumo ecaleni lokwebiwa kuka-R103 million
Next articleUkufanisa nesibusiso ukucula noDeborah